अन्तर्वार्ता – Anurag Post
Nepal Idol2मा के हुँदैछ ? Host रिमा र आशिफ
April 11, 2018	अन्तर्वार्ता, भिडियो, मनोरन्जन 0
भिडियो हेर्नुहोस योपनि पढनुहोस ‘तिमी हुन्छौ जहाँ जहाँ’ को पहिलो गीत सार्वजनिक, मनिषको अँगालोमा बोल्ड मलिना (भिडियोसहित) काठमाडौँ । फिल्म ‘तिमी हुन्छौ जहाँ जहाँ’ को पहिलो गीत सार्वजनिक भएको छ । काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै फिल्मका निर्माण पक्षले प्रचार प्रसार स्वरुप ‘तिम्रो हर सासमा’ बोलको गीत सार्वजनिक गरेको हो । …
२० वर्षिय रोशनाको सडक दुर्घटना गराएर जिम्मेवारीबाट भाग्दै प्रहरी
April 5, 2018	अनुराग पोष्ट, अन्तर्वार्ता, स्वास्थ्य 0
काठमाडौं । नर्भिक अस्पतालको २०१ नम्बर शैयाबाट न्यायको याचना गरीरहेकी उनी रोशना रामुदामु । अस्पतालको शैयाबाटै हाम्रो कार्यक्रममा स्काइप मार्फत नेपाल प्रहरीको गाडीले आँफुलाइए ठक्कर दिएर उपचारमा वेवास्ता गरेको बताएकी थिइन । पब्लिक युथ क्याम्पसमा व्याचलर तेस्रो बर्ष अध्ययन गरीरहेकी २० वर्षिय रोशना र उनका दाइ रोनस फागुन १७ गते …
४९ हजारमा २ टाँका,यो अस्पताल कि ‘डाँका’ ? सडक विस्तारले कसैलाई बेघर नबनाओस !
April 3, 2018	अनुराग पोष्ट, अन्तर्वार्ता, भिडियो, राजनीति 0
४९ हजारमा २ टाँका,यो अस्पताल कि ‘डाँका’ ? सडक विस्तारले कसैलाई बेघर नबनाओस – SIDHA KURA JANATA SANGA !! EPISODE 205 ‘अँध्यारो किन भयो भनेर १० बर्षसम्म थाहा नपाउनेलाई चिनौं र जेलको अँध्यारोमा धकेलौँ’ खोज पत्रकारीता केन्द्रले सार्वजनिक गरेको रिपोर्टले यो मुलुकलाई एक दशकसम्म अध्याँरोमा राख्ने कुकृत्यको चिरफार गरेको छ …
March 22, 2018	अनुराग पोष्ट, अन्तर्वार्ता, भिडियो, राजनीति 0
कार्यक्रमको २०० औं भागमा छौं । करिब डेढ बर्षको यो यात्राले एउटा तरंग ल्याएको भान हुन्छ । हरेक वेथिती, बिसंगती र अनियमितताको जवाफ देशका प्रमुख नेतृत्वले मात्र दिनु पथ्र्यो । तर हामीले त्यो क्रमलाई भंग गर्ने प्रयास ग¥यौँ । हरेक नागरिक जिम्मेवार छन् भन्ने सन्देश हामी यो समाजमा प्रवाह गर्न …
March 8, 2018	अन्तर्वार्ता, भिडियो, राजनीति, स्वास्थ्य 0
८ बर्षीय बालिका बलत्कार गर्ने सुनिल शाह तुराहा पक्राउ,लाइभमै आयो अर्को बलत्कारको सुचना । ‘सेवा गर्ने हातले अवार्ड नउचाले पनि फरक पर्दैन तर देखाउनका लागि गरिएको सेवा ठ्याक्कै छुटिन्छ’ आज अन्तराष्ट्रिय नारी दिवस । संसारका विभिन्न देशमा शक्तिशाली र महत्वपुर्ण स्थान ओगटेर नारीहरु अघि बढ्दै छन् । तथ्याङले देखाएको छ …
‘छविजी अझै मेरो परिक्षणकालमा हुनुहुन्छ’ (भिडियो)
March 6, 2018	अन्तर्वार्ता, भिडियो, मनोरन्जन 0
काठमाडौँ । अभिनेत्री शिल्पा पोखरेल अहिले चर्चाको केन्द्रविन्दुमा छिन् । छविराज ओझाको लगानीमा बनेको ‘लज्जा’बाट चलचित्र अभिनयमा डेव्यु गरेकी शिल्पाको चर्चाका दुई कारण छन् । उनी चलचित्र निर्माता बनेको कारण एक हो भने अर्काे कारण निर्माता छविराज ओझासँगको सम्बन्ध पनि हो । निर्माताको रुपमा उनले आफूले व्यवसायिक र राम्रो चलचित्र …